CAT S41, ity no telefaona vaovao tsy simba avy amin'ny CAT | Androidsis
Ianareo rehetra dia efa niatrika fianjerana an-tariby tamin'ny valiny fisarahana. Ary raha tsy nitranga taminao izany dia azo antoka fa olona ao amin'ny fianakaviana na namana iray no niaritra fikorontanana toy izany. Ary izy ireo dia satria tsy nampiasa telefaona CAT.
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fitaovana tsy mahazaka toetr'andro miaraka amin'ny fanamarinana miaramila ny mpanamboatra. Ny ohatra farany? ny CAT S41, vatolampy tena izy izay azonay notsapaina teo amin'ny toeran'ny mpanamboatra nandritra ny IFA tany Berlin.
2 Toetra teknika CAT S41
Ny telefaona CAT dia tsy natao ho tsara tarehy, fa mba hiasa. Ny mpanamboatra manome ny terminal-ny fanoherana lehibe ny fikoropahana sy ny fianjerana amin'ny vidin'ny tsy fahafahany manolotra endrika voafehy, miaraka amin'ny mahia manify na ny fiolahana manintona. Tsy misy na inona na inona lavitra ny marina, ny CAT S41, toy ny tsipika terminal rehetra avy amin'ny mpanamboatra, dia tsy tsara tarehy, fa tena mahazaka.
Ary io no vahaolana vaovao ananan'ny mpanamboatra, etsy ankilany, a Fanamarinana IP68 izay mampanantena fa azo alentika anaty rano tsy misy olana mandritra ny 30 minitra ny telefaona, ankoatry ny fananana Fanamarinana miaramila 810G izay mahatonga ny CAT S41 ho toy ny finday mahazendana sy mahatanty tena.
Ny vahaolana vaovao CAT Izy io dia manana endrika mavitrika, voaomana manokana hiaritra fampijaliana rehetra, ary koa ny bokotra lehibe kokoa misy fantsona fingotra mamela ilay fitaovana hampiasaina amin'ny toerana rehetra, na inona na inona tananao feno fotaka, lena ...
Raha fintinina, vatolampy manohana ny zava-drehetra. Raha misy mampiavaka ny terminal CAT dia ny fanoherana avo lenta ny vahaolana misy azy sy ny CAT S4Ny 1 dia santionany vaovao amin'izany.
Toetra teknika CAT S41
efijery 5.0 santimetatra miaraka amina vahaolana feno HD sy fiarovana Gorilla Glass 4
Rear Camera 13 MPx - PDAF
Fitaovana hafa IP68 voamarina / 810G Miaramila voamarina / Accelerometer / Gyroscope / Dual Speaker
Raha ny toetra teknika no jerena, ny CAT S41 dia telefaona iray izay mihoatra ny mahafeno ny filan'ny mpampiasa rehetra. Fanamafisana manokana ny anao Efijery 5-inch miaraka amin'ny vahaolana feno HD manolotra loko madio sy mazava. Saingy araka ny nolazaiko tamin'ny fiheverana horonantsary voalohany, ity telefaona ity dia tsy vonona ny hamindra ny lalao tsara indrindra eny an-tsena fa hizaka ny loza mety hitranga, afaka mitondra an'ity telefaona ity na aiza na aiza nefa tsy manahy na inona na inona.
Bebe kokoa raha raisintsika ny Cat S41 manaitra izay mampanantena fahaleovan-tena eo anelanelan'ny 3 sy 4 andro. Faran'ny herinandro any an-tendrombohitra? aza matahotra fa tsy handiso fanantenana anao ny CAT S41.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » CAT S41, ity no telefaona vaovao tsy simba avy amin'ny CAT
Misaotra amin'ny fampahalalana
Hianjera ny sambo ... na ho ela na ho haingana ...
Honor 8 Pro sy smartphone 6X dia hanavao ny Android Oreo alohan'ny faran'ny taona
Fifanarahana adala 3 andro hankalazana ny tsingerintaona faha-XNUMX an'i Banggood